Sida loogu ciyaaro Mario Bros mobilka | Androidsis
Ignacio Sala | 07/05/2021 18:00 | La cusbooneysiiyay 10/05/2021 11:24 | Ciyaaraha Android, Super Mario Run
Mario iyo Sonic waa labada kulan ee ugu da'da weyn ee sii wadaya in ka badan 30 sano ka dib markii ay suuqa ku dhufteen. Mario iyo Sonic waxay noqdeen jilayaasha la xidhiidha Nintendo iyo Sega siday u kala horreeyaan iyo illaa dhalashadoodii waxay lahaayeen cinwaano fara badan iyo xitaa la qabsashada filimada.
In kasta oo xaqiiqda ah in Sega uu ka tagay suuqa qunsuliyadda, Sonic wuxuu ku sii jiray waqtiga, sida Mario, khabiirkii riwaayadda ahaa ee Nintendo ee soo maray mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah qunsuliyadihii ay shirkadda weyn ee Japan ka furtay suuqa, xitaa gaarsiinta aaladaha mobilada.
Si kastaba ha noqotee, la qabsashada gaadhay qalabka ma aysan helin guusha Nintendo laga yaabo inay rajeyso, qayb ahaan sababtoo ah shirkadda tan iyo markii ay rabto bixiyaan khibrad gebi ahaanba ka duwan kaas oo ay dhaqan ahaan u soo bandhigtay, isla markaana u soo bandhigtay, iyada oo loo marayo qunsuliyadeeda, taas oo ugu dambeyntii ku qasabtay shirkadda inay dib uga fikirto cinwaanada noocaan ah ee aaladaha mobilada, illaa heer ay si ku-meelgaar ah u curyaamiso soo-saarista.
Suurtagalnimada kaliya ee lagu ciyaari karo mid kasta oo ka mid ah noocyada kaladuwan ee Mario waxay ahayd iyada oo loo marayo Console Nintendo. Laakiin, la imaanshaha noocyada moobiilka iyo macangagnimada emulators iyo tabaha kale, waan awoodnaa ku ciyaar Mario Bross mobilka qaab aad u fudud iyo, mararka qaarkood, gebi ahaanba bilaash ah.
Nintendo waa mid ka mid ah shirkadaha ka shakisan hantidooda aqooneed, iyada oo ogolaansho laga haysto Disney, sidaas darteed wuxuu had iyo jeer sameeyaa sida ugu fiican si uu u baabi'iyo ikhtiyaar kasta oo la heli karo si uu uga ciyaaro cinwaannada Mario ee internetka, illaa iyo inta suurtagal ah.
Shirkaddu waxay gaadhay illaa ay weydiisato YouTube-ka ka saari doonaa gameplays cinwaanadaada, tallaabo ay xitaa shirkadda lafteeda u aragtay wax aan macquul ahayn muddo ka dib, maadaama ay ahayd istuudiyaha kaliya ee sameeya oo aan u oggolaan kuwa xiiseynaya ciyaarta inay daawadaan fiidiyowyada ku saabsan ciyaarta, tayada garaafka ... ee cinwaanka ay ugu talagaleen iibso
Adoo ka tagaya talaabooyinka doqonimada ah ee shirkada Japan ay qaaday sanadihii la soo dhaafay, ayna sii wadayso inay qaado, halkan ayaan ku tusaynaa sida loogu ciyaaro Mario Bross taleefanka gacanta ee Android.
5 Dunida Lep
7 Dunida Bob
8 Isticmaal emulator
Super Mario Run wuxuu ahaa cinwaankii ugu horreeyay ee Nintendo uu ku sii daayo aaladaha mobilada waana gabi ahaanba fashil. Sababta lama xiriirin gameplay-ka ay bixiso, taas oo sidoo kale, laakiin qiimaha iibka barnaamijka ee ku siinaya inaad marin u hesho dhammaan waxyaabaha laga heli karo ciyaarta: 10,99 euros.
Qiimo xad-dhaaf ah, iyadoon loo eegin sidaad u eegto, cinwaanka meesha kaliya ee aad ku riixeyso shaashadda si uu Mario uga boodo caqabadaha ka-leexashada iyo ururinta shilimaadka caadiga ah. Cinwaankani, wuxuu ina siinayaa qashinkeenna afar hababka ciyaarta: Caalamka, jinsiyadaha, Remix 10 iyo Boqortooyadayda.
Super Mario Run wuxuu naga dhigayaa qashinkeena 6 adduunyo iyo 24 heer inaad awood u yeelatid inaad gaartid qalcadda Browser oo aad awoodid inaad sii deysid Princess Peach. Si aad ugu raaxeysato cinwaankan, taleefanka casriga ahi waa inuu maamulo Android 4.4 ama ka dib. Waxay u baahan tahay xiriir internet ah.
Cinwaanka labaad ee ay bilawday shirkadda Nintendo ee astaamaha ugu astaanta badan wuxuu ahaa Mario Kart Tour, ciyaar kale oo aan ku soo dejisan karno bilaash laakiin ay ku jirto Iibsashada app-ka noocyadiisa kala duwan, oo ay ku jiraan rukumo, sida haddii ay ahayd mishiinka ciyaarta.
Ay kujirto qaab ciyaartooy badan si loola ciyaaro asxaabta kale. Inta aan ku guuleysaneyno tartamada, waan tagnaa furitaanka gawaarida cusub iyo jilayaasha, ahaanshaha caawimaad weyn si aan u helno dhammaan xiddigaha aan ku kulanno jidka si aan u helno dhammaan calaamadaha ciyaarta.
Mario Kart Tour, sida Mario Run, wuxuu u baahan yahay xiriir internet oo joogto ah, waxaa ku jiri kara xayeysiinta (dalku wuu ku kala duwan yahay) wuxuuna u baahan yahay Android 4.4 ama ka dib. Iibsashada app-ka ayaa tagaya laga bilaabo 2,29 euro ilaa 74,99 euro.
Qiimayaashan, waa wax iska caadi ah in Nintendo uu sheegay inuu qaadan doono muddo iyo dib ha u sii daayo la qabsiga cusub ee ciyaarahaaga qalabka mobilada. Cinwaanka kaliya ee dhammaan la qabsiga ee soo-saaraha konsole ay ka bilaabeen suuqa qalabka mobilada ayaa ahaa Heroes ASTAANTA Fire y Goynaya Animal.
Dr. Mario World waa cinwaankii ugu dambeeyay ee uu jilayo Mario, in kasta oo, si ka duwan kuwii hore, aysan ahayn arcade laftigeeda, laakiin waa inaan madaxa isku riixnaa si aan u xallin karno dhibaatooyinka 600 weji in ay noo soo gudbiyaan si aan meesha uga saarno bakteeriyada kaniiniyada leh.
Waxaan isku halleyn karnaa gargaarka Luigi, Peach, Bowser, Yoshi, Toad, Wario, Waluigi, Daisy, Estela, Donkey Kong, Caco Gazapo, Koopa, Lakitu iyo kuwa kale ciyaar waxay u baahan tahay internet, ayaa loo heli karaa soo dejin bilaash ah waxaana ku jira wax ku iibsiga gudaha oo u dhexeeya 2,29 euro ilaa 74,99 euro waxayna u baahan tahay Android 4.4.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan ka ogaanno cinwaankan ayaa ah inaysan ahayn asalka Nintendo. Super Adventure wuxuu ina tusayaa dabeecad aad ula mid ah Mario (waa isku mid) taas oo ah inaan u boodno si aan u soo uruurino qadaadiicda, aan uga leexanno cadawga una dhameystirno dhammaan heerarka. Sababta Nintendo uusan u saarin waa sababta oo ah kuma jiro magaca Mario sharaxaadda, ama cinwaanka ama ciyaarta lafteeda.
Super Adventure Jungle World 2021 ayaa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash waxaana ku jira xayeysiis, laakiin ma jiraan wax iibsi gudaha ah. Si aad ugu raaxeysato cinwaankan, casriga casriga ah ee Android waa in lagu maareeyaa Android 4.1 ama ka dib.
Developer: Ciyaarta Super Max
Iyada oo in ka badan 100 milyan oo soo dejin iyo qiimeyn celcelis ahaan ah 4.4 xiddigood 5tii suurtagal ee ku saleysan wax ka badan 1 milyan oo faallooyin ah, waxaan heleynaa Lep's World, ciyaar nuqul ka sameysa bilicsanaanta iyo hawlgalka Mario Bross laakiin leh jilayaal gebi ahaanba ka duwan, oo leh gummaad.
Dunida Lep waa ciyaarta runtii waxay ahayd inuu sameeyo Nintendo markay sii deysay Mario Run aaladaha mobilada, ciyaar aan ku xakamayn karno dabeecada dhaafsiisan boodboodka. Hadafka dabeecadeena (waxaan haysanaa 8 kuwa kala duwan oo aan kala doorano) waa inaan ka caawinno Lep inuu helo dahabkiisa.
Cinwaankani wuxuu ina siinayaa wax badan 160 heerar, 6 adduun oo leh mawduucyo kaladuwan, 9 cadaw Waana loo heli karaa soo dejinta gebi ahaanba bilaash, taas oo ah, waxay ku jirtaa iibsashada abka ee u dhexeysa 0,75 euro ilaa 99,99 euro. Si loogu rakibo cinwaankan qalabka 'Android', waa in lagu maareeyaa Android 4.4 ama ka dib.
Ciyaar kale oo leh muuqaal qurux badan oo loo helay Mario waa Super Jabber Jump 3, oo ah cinwaan ku beddelaya tuubbo caan ah shaarib nooc nooc ah burcad badeed yaa laga doonayaa inuu mid kale ka qadaado shilimaad dhammaan heerarka ay noo diyaarinayso.
Jabber-geygeena ayaa ku boodi kara, ku ordi kara oo ku dhici karaa cadaawayaashiisa 5 adduun oo mid waliba leeyahay cadowgeeda u dambeeya. Ujeedada Jabber waa inay soo ceshato jawharadii laga xaday oo ay sameyso sidaa darteed waa inuu ka gudbaa 100-ka heer ee cinwaankan uu na siinayo.
Super Jabber Jump 3 ayaa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash, waxaa ku jira xayeysiisyada iyo iibsashada barnaamijka kaas oo leh qiimo u dhexeeya 1,09 euro ilaa 10,99 euro. Nooca ugu yar ee Android ee awood u leh inuu ku rakibo cinwaankan qalab Android waa Android 4.1
Dunida Bob waa cinwaan ku saleysan seddexdii hore ee lagu dhiirrigeliyay ciyaarta iyo naqshadeynta Mario, laakiin leh dabeecad gebi ahaanba ka duwan iyo meesha ay tahay ujeeddada halyeeygeena, xaaladdan Bob, waa samatabixi amiiradda, intaad boodaysid, oroddo, tooganaysid iyo cadawga aad ka cararayso.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ay bixiso cinwaankan ayaa ah inaysan u baahnayn xiriir internet. Waa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash, waxaa ku jira xayeysiisyada iyo iibsashada barnaamijka laga bilaabo 1,99 euro ilaa 10,99 euro, iyadoo loo baahan yahay Android 5 ama ka dib si loogu rakibo aaladda Android.
Dunida Bob 2: Ciyaaraha Orodka
Haddii cinwaannada Nintendo ay sii daayeen kuma qancinayaan, sida beddelka xiisaha leh ee aan ku tusay, waxaad ka faa'iideysan kartaa emulator-ka qalabkaaga Nintendo. Haddii aan ka hadalno emulators, waa inaan ka hadalnaa RetroArch, emulator-ka ugu fiican iskutallaab-kumbuyuutareedka qalab kasta.
Intaa waxaa dheer, waa il furan oo gebi ahaanba bilaash ah, sidaa darteed waa inaad kaliya ka walwashaa raadinta internetka ee ROM-yada noocyada Mario ee aad ugu jeceshahay. Kuma jiraan xayeysiis ama wax ku iibsiga barnaamijka, wuxuu noo ogolaanayaa inaan xakameyno kontaroolada sida aan u jecel nahay, waxaa laga heli karaa Isbaanish ...
Dib noogu soo celi wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku ciyaarto wax ciyaar ah qalab kasta Shaashadda, inkasta oo ay la jaan qaadi karto burooyinka xakamaynta, markaa haddii aad mid ku haysato guriga, khibradda ciyaartu waxay noqon doontaa mid aad u wanaagsan oo ka sii wanaagsan, raaxo leh, haddii aad sidoo kale taleefankaaga ku xirto telefishankaaga.
Intaa waxaa dheer, waxay leedahay a kanaalka ku saabsan Discord halkaas oo aad su'aalo ku weydiin karto, ka raadin karto ROM-yada, aad ka heli karto taageero xagga farsamada ah, in kasta oo loo marayo marinkeeda YouTube Waxaad awoodi doontaa inaad xalliso inta badan shakiga la xiriira waxa dalabku ku siiyo iyo sida aad u sameyn karto.
Ikhtiyaar kale oo xiiso leh iyada oo aan loo baahnayn in la rakibo gabi ahaanba codsi kasta qalabkayagu wuxuu ku dhex marayaa shabakadda 'Minigames', halka ay tan ku taal qaybta, waxaan gacanta ku haynaa noocyo badan oo noocyo ah, oo aan rasmi ahayn dabcan, Mario iyo dhamaan asxaabtiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Super Mario Run » Sida loogu ciyaaro Mario Bros mobilada
Mario Bros. Wuxuu la tagaa hal S dhamaadka ah…. oh my ...